Njalo umlingisi abanamakhono has amahle biography ayo kwezobuciko. Salman Khan - kumdlali we-Indian cinema, eyaziwa njengoba wawusondela oluvelele kukhethwa izindima - iyona imibukiso engcono lokhu ukuhlakanipha okungokwesiko. Igama samanje umlingisi - Abdul Rashid Salman Khan, futhi ibonakele ukukhanya edolobheni elincane esilengayo Disemba 27, 1965.
Salman Khan - omdala emndenini, okhokho baso babengabapristi kusukela e-Afghanistan, yingakho okokuqala ke kuvela esibukweni, izethameli wazizwa Khan owezizwe. Anakho abazalwane ababili - Sohail futhi Arbaaz, nabo abadlali abaziwayo kanye ethandwa e-India. Kuyinto nge Arbaaz Salman kwaba e Gwalior boarding. Odadewabo ababili - Arpita futhi Alvira - wanquma ukungawasebenzisi i lwamakhosi esebenza bazinikezela ubuchwepheshe ezolile ngaphezulu.
Kusukela ngiqala kwakhe umsebenzi, yena kumafilimu cishe 100 eyenziwe Bollywood. Namuhla amafilimu Indian ne Salman Khan athandwa kakhulu, hhayi nje kuphela ezweni lenkaba yakhe, kodwa futhi lonke elase-Asia. Wenza DEBUT yakhe njengoba kumdlali emkhathizwe elikhanyayo cinema Indian ngo-1988, edlala indima encane isici ifilimu "Umfazi."
Ngemva kwalokho Salman waqala ngenkuthalo khona okuku ngokukholwa ngokwabo futhi enethemba lokuthi indima abaholayo kunoma iyiphi i-movie. Luck bamoyizela, esikhathini esingangonyaka kamuva, lapho abanye bakuqaphela ngumqondisi we ifilimu "Ngamthanda" futhi wamema iqhaza ifilimu. Khan walinika 100 per cent, ngoba yena wabusiswa ngokugcwele: kayiwanga kuphela udumo nokuduma, kodwa futhi inikeza kusukela abaqondisi nabakhiqizi. Phakathi kwezinye izinto, lo amajaji indondo ifilimu yodumo ngokuwina umlingisi Filmfare umklomelo emkhakheni "Kuhle Debut Owesilisa."
Kusukela ngaleso sikhathi, la mafilimu yimpumelelo kuphela dazzled nge yomlando wakhe. Salman Khan ezimpini ukuthwetshulwa ezifana amafilimu yimpumelelo ngokuthi "Umfazi inombolo eyodwa", "Judwaa", "Izintandokazi zami", "Karan Arjun", kanye nabanye abaningi. Sekuyiminyaka eyisikhombisa, umlingisi wathwebula eziningi ngokuvumelana cishe zonke iziphakamiso wathola kusukela abaqondisi.
Lo mlingisi, asebenze engakhathali (kufakazelwa yomlando wakhe). Salman Khan ngo-1999 wathandwa Filmfare Award Kuhle Ukusekela lwabalingiswa. Umvuzo wakhe efika indima akahle okuphawulekayo ifilimu "Konke ukuphila kwenzeka." Futhi ngo-1999 waletha Khan indima movie edumile "Phakade eyakho", okuyinto langena yengcebo cinema Indian.
Kowezi-2000, oyibamba umsebenzi Khan aqala ukuncipha, yena isuswe ngaphansi ngikhetha kaningi sengqondo kukhethwa zimo. Umndeni isibe igunya main emphilweni kumdlali, kufakazelwa yomlando wakhe. Salman Khan kowezi-2000 izinkanyezi ku ezifana amafilimu ethandwa ngokuthi "Tere Naam", "Cha Ukungena" kanye "Thatha efile noma ephila." Kufanele futhi usho Umdwebo "Abangesabi" eyaqala wesibili Bollywood ibhokisi ehhovisi (kusukela buqala).
Salman Khan, ogama biography is cishe bonke abathandi cinema Indian ezaziwayo, iye ngokuphindaphindiwe olahlwe yicala amacala ekuhlelekeni komphakathi. Kwaphela iminyaka eminingana lase yena ebuhlotsheni nge ethandwa Bollywood actress Aishwarya Rai, kodwa ngemva kokuvukela kombhangqwana behlukana kwaba sobala ukuthi Khan isinyathelo okungenani ezinenhlamba. Abazali actress ngokuphindaphindiwe yakhalaza emaphoyiseni Salman, ngubani isikhashana wajaha Aishwarya, befuna ukubuyela ubuhlobo. Manje umlingisi akashadile futhi uyaqhubeka ukwenza kumafilimu.
Njengoba emsipheni sciatic iphathwa yisihlungu, zokuvimbela futhi izimpawu.